Abaabulka Waxbarashada Oo Kaqabsoomay Caado Iyo Kurtunle - Cakaara News
Abaabulka Waxbarashada Oo Kaqabsoomay Caado Iyo Kurtunle
Wardheer(Cakaaranews) Jamce, 16ka September 2016. Waxaa maanta tuulooyinka caado iyo kurtunle ee hoos yimaada degmada wardheer kaqabsoomay shirwaynihii abaabulka diwaangalinta waxbarashada.
Shirwaynahan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta degmada oo uu kamid yahay madaxa xafiiska horumarinta beeraha degmada wardheer mudane Mukhtaar Cabdi Sahal, kooxda waxbarashada heer deegaan oo uu hor kacayo mudane Maxamed Yuusuf Xuseen, xildhibaan: gurey cali Daahir iyo marwo farxiya cabdulaahi khaliif-gudoomiyaha ururka macalimiinta heer deegaan iyo qaybaha kaladuwan ee bulshada.
Hadaba mas’uuliyiintan oo halkaa kuladashay qaybaha kaladuwan ee bulshada ayaa kuboorisay inay soo xareeyaan ardayda da’da waxbarashada gaadhay, kuwii horay usii dhigan jiray, ardaydii loox-tuurka ahayd, kuwa dhimirka waxkaqaba ama naafada ah iyo waliba inay isusoo diwaangaliyaan waxbarashada dadka waa wayn. Team leaderka kooxda waxbarashada heer deegaan mudane Maxamed Yuusuf Xuseen ayaa intaa kudaray in gudiyada waalidiinta iyo kuwa degmada oo iskudhafan looga fadhiyo inay guri kasta oo tuulooyinkan kamid ah garaacaan si aan loo arag ilmo da’da waxbarashada gaadhay oo guriga ama banaanka bilaa waxbarasho jooga.
Dhanka kalena, bulshada ayaa balan-qaaday inay kasoo baxayaan hawlaha abaabulka iyo diwaangalinta waxbarashada oo ay tahay mid iyaga udan ah islamarkaana iyaga utaala maadaama oo lasoo gaadhsiiyay iyagoo dhankoodana hoosta kaxariiqay inay sii xoojinayaan kaqaybgalka waxbarashada oo ay waliba bilaabi doonaan dhismayaal dugsi oo ay kaqaybgalka bulshada kudhisayaan.